CeleTrend | News and Media - Part 40
May 21, 2020 CeleTrend 0
ဘင်္ဂလားပင်အော် ၏ အပြင်းထန်ဆုံးမုန်တိုင်း ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အန်ဖန်ကြောင့် အိန္ဒိယနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ တွင် အများအပြား ပျက်စီး အိန္ဒိယနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ ကမ်းရိုးတန်းများ သို့ အင်အားပြင်း ဆိုင်ကလုန်း အန်ဖန် ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ ရာ လူ ၂၀ ခန့် သေဆုံးခဲ့ပြီး ပျက်စီးမှုများ ရှိခဲ့သည် […]
ယနေ့ ( 20 .5.2020 ), Fb လူမှု့ကွန်ယက်၌ပျံ့နှံ့နေသော အောင်ပန်းမြို့ မဂ်လာရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်လျှက်ရှိသည့် အငြိမ်းစားကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးအား ညီမအရင်းဖြစ်သူမှ နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းခြင်း ခေါင်းစဉ်ဖြင့် , သတင်းများကြောင့် ကျမတို့ အောင်ပန်းမြို့ အသင်းခွဲမှ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း နှင့် အမျီုးသမီးရေးရာအဖွဲ့တို့မှ သွားရောက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ကြပါသည် ။ယခုအခါတွင် ဆရာမကြီးသည် […]
ဟာသဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်အသိမှတ်ပြုအားပေးခြင်းရရှိထားသူ ကြူကြူသင်းကတော့ ဒီနေ့မှာ သူ့ဘဝရဲ့နောက်ကွယ်က အကြောင်းတချို့ကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ ရုပ်ရှင်လောကမှာ နှစ်သုံးဆယ်ကျော်ကြာ လုပ်လာသူဖြစ်ပေမယ့် အခုချိန်ထိ အိမ်ပိုင်တောင်မရှိသေးသူပါ။ သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကိုက မောင်နှမသားချင်းတွေနဲ့အတူ အိမ်တစ်လုံးထဲမှာ စုပြီးနေထိုင်တာကြိုက်ကြတာမို့ အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဝယ်ဖို့ မစဉ်းစားခဲ့ကြသူတွေပါတဲ့ ။ တကယ်တန်း မိဘတွေဆုံးပါးပြီး အမွေဆိုင်အိမ်ကြီးကနေ သူ့မိဘတွေရဲ့ဝေစုကို […]
တနင်္ဂနွေ အလုပ်သစ်၊ စီးပွားသစ်များ၊ ရပ်ဝေး ခရီးစဉ်များအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန် အချိန်အခါကောင်းဖြစ်သည်။ မိမိအထက်အရာရှိများ မိမိကိုအုပ်ချုပ်သူများနှင့် သဘောထားကွဲလွဲမှုရှိနေပါလိမ့်မည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးများတွင် အနစ်နာခံရမှုများပြားနေရပါလိမ့်မည်။အရာရာတွင် စိတ်မြန်လက်မြန်ပြု တတ်သူဖြစ်သော်လည်း မိမိ၏ လုပ်ဆောင် ချက်များသည် ယခုအချိန် နှေးကွေးလေးလံနေမည်။ ကြုံတွေ့ပတ်သက်လာတတ်ပါသော မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန်လိုပါသည်။အတွေးအခေါ် ကောင်း၍ ရှေ့ရေး အတွက်ကြိုတင်ကြံဆ […]
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၀၇ ဦးကို ဒုတိယအသုတ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ မနေ့က ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဌာနက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာခရီးသည်တင်လေယာဉ်တွေ ပျံသန်းမှုယာယီရပ်ဆိုင်းထားလို့ မလေးရှားမှာ အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၀၇ ဦးကို မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေကြောင်းလိုင်း (MAI) ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်နဲ့ ဒုတိယအသုတ်အဖြစ် ပြန်လည် ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရာ […]
ပျော်ပျော်နေစေချင်တယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။လူမင်းကတော့ ချစ်ရတဲ့ဇနီးချော ခင်စံပယ်ဦးအတွက် မွေးနေ့ ဆုတောင်းစကားတွေပြောလာပါတယ်။သရုပ်ဆောင် လူမင်းကတော့ ဒီနေ့ မေလ(၂၁) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ခင်စံပယ်ဦးရဲ့ မွေးနေ့အတွက် ဆုတောင်းစကားလေးတွေပြောလာပါတယ်။ ဇနီးချောလေးကိုလည်း အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်နေတာပဲ မြင်ချင်တဲ့ သူ့ရဲ့ ဆန္ဒကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ “(21. 5. […]
COVID -19 ကိုယ်ခံအား ထွက်မထွက် သိရှိရန် စစ်ဆေးသော Reagent အသစ်ကို AA Medical Products ကုမ္ပဏီက တင်သွင်းရန် FDA သို့ တင်ပြထားပြီး ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက Test လေးသောင်းကျော် လှူဒါန်းမည်
COVID – 19 ကိုယ်ခံအား ထွက်မထွက် သိရှိရန်စစ်ဆေးသော Reagent အသစ်ကို AA Medical Products ကုမ္ပဏီက တင်သွင်းရန် FDA သို့ တင်ပြထားပြီး ခွင့်ပြုချက် ရရှိပါက Test လေးသောင်းကျော်ကို လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း AA Medical Products Ltd […]
ထိုင်းနိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် စာရင်းပေးထားသူ သုံးသောင်းကျော်ရှိ
ထိုင်းနိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့ သံရုံးကို အွန်လိုင်းကနေတဆင့် စာရင်းပေးထားသူဦးရေ သုံးသောင်းကျော်ရှိတယ်လို့မြဝတီခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ဦးတေဇာအောင်က ပြောပါတယ်။စာရင်းပေးသွင်းထားသူတွေအနက် တစ်နေ့ကို လူဦးရေ ၂၀၀ခန့် ပြန်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ထိုင်းနိုင်ငံက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်း သွားလာနိုင်မှုအပေါ် မူတည်ပြီး သွားလာခွင့်အရေအတွက်ကို တိုးမြှင့်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ “လက်ရှိဝင်လာမည့်သူက တစ်နေ့ကို […]
ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် သီဟတင်စိုးက ငွေကြေးအရှုပ်အရှင်းကိစ္စတွေကြောင့် ကျိုက်လတ်မြို့မှာ အမှုဖွင့်အရေးယူခံထားရတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သီဟတင်စိုးတို့မိသားစုဟာ ငွေကြေးခိုင်မာတောင့်တင်းသူတွေဖြစ်ပြီး အခုလိုကိစ္စမျိုးနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ပရိသတ်တွေက အမျိုးမျိုး ဝေဖန်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကိစ္စနဲ့ ပက်သတ်ပြီး သီဟတင်စိုးရဲ့ ညီအရင်းဖြစ်သူ စည်သူတင်စိုးက အခုလိုပဲ ပွင့်လင်းစွာချပြပြောဆိုလာပါတယ်။ “ကိုယ်တိုင်သေချာမသိပဲ ကြားသုံးကြားထဲဝင်ပါပြီး […]
မွေထိုင်းချန်ပီယံကို မြန်မာ့လက်ဝှေ့ချန်ပီယံ ဒေဝ စိန်ခေါ်
မြန်မာ့ ရိုးရာလက်ဝှေ့ချန်ပီယံတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေဝ ဟာဆိုရင် ပရိသတ်ရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ ရှည်လျားတဲ့အရပ် ၊ ထိုးသတ်ပုံ သပ်ရပ်မှုတွေက သူ့ကိုချန်ပီယံအဖြစ်တွန်းပို့ခဲ့သလို ၊ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကိုလည်း အစဉ်မပြတ်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာဆိုရင် မြန်မာရိုးရာလက်ဝှေ့ကို ချစ်ခင်လေးစားသူဖြစ်သလို ၊ တန်ဖိုးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကတော့ သူဟာ […]